Maxaa ka hortaagan madaxwayne farmaajo in uu akhriyo fariimaha tiwitter ka loogu diro? - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Maxaa ka hortaagan madaxwayne farmaajo in uu akhriyo fariimaha tiwitter ka loogu diro?
Maxaa ka hortaagan madaxwayne farmaajo in uu akhriyo fariimaha tiwitter ka loogu diro?
December 19, 2019 Duceysane608
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku biirey Twitterka bishii December 2016 xilligaa oo uu u tartamayay xilka madaxtinimada Soomaaliya,waxana tan iyo markaas saaxibo ama followers la noqday cinwaano gaaraya illaa 274,000,balse waxa uu Madaxweynuhu saaxib folllower la yahay hal cinwaan oo kaliya.
Sida uu daabacay The Frontier halka cinwaan ee uu follower ama saaxib la yahay Farmaajo ayaa ah Villa Somalia ama Madaxtooyada Soomaaliya. Waxana uu illaa 140 xaraf u qoray cinwaankaas oo aan ahayn mid shaqsi uu leeyahay.
“Madaxweynuhu xitaa ma aqriyo qoraal uu shaqsi kale u soo direy balse waxa uu isaga shaqsiyan bishii November oo kaliya direy 544 jeer.”ayaa lagu daabacay bogga The Frontier.
Madaxweynaha waxaa saaxibo ama followers la ah inta badan madaxda dalka sida Ra’iisul Wasaare Kheyre kaasoo ku leh labo cinwaan Twitterka.
Cinwaanada Ra’iisul wasaaraha oo ah Villa Somalia iyo Somali PM oo xafiiskiisa laga maamulo ayaa waxaa ay leeyihiin inku dhow 78,000 oo saaxibo ama followers ah.
Hase yeeshee, wargeyska daabacay warbixintan ayaa ku sifeeyay sababta uusan Madaxweyne Farmajo uusan u fiirineyn fariimaha dadka kale inay tahay isagoon dooneyn in laga mashquuliyo howlaha kale ee uu hayo.
Dadka waxa ay u isticmaalaan Twitterka sidii ay u heli lahaayeen akhbaaraad ayna fikradahoodu ula wadaagi lahaayeen dadka kale,haddaba waa maxay sababta Farmajo uusan dadka kale ula xiriireyn ayuu is weydiiyay qofka qoray warbixintan?
Waxaa laga yaabaa inuusan Madaxweynuhu dooneyn inuu lugaha la galo arrimaha siyaasada dalkiisa ama inuusan dooneyn inuu ogaado waxa dadka kale ay sheegayaan.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ah hogaamiyaha ugu badan ee caalamka dadku ku xiran yihiin cinwaankiisa Twitterka ayaa leh illaa 47 cinwaan oo uu raaco ama saaxib la yahay.
187 dal oo caalamka ku yaal ayaa bogga Twitterka cinwaano ku leh ha noqdaan shaqsi amaba hay’ado dowli ah.
IMF oo soomaaliya ku amaantay hormarka ay ka samaysay qorshaha dayn cafinta
Siciid deni oo ku baaqay in qaab dhaqaale lagula dagaalamo Alshabaab
January 30, 2020 Duceysane
Nabadoon Caan ah oo lagu dilay Magaalada Afgooye
Ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab oo cawa ku Dagaalamay qaybo ka mid ah Degamada Afgooye
October 23, 2017 Cali Yare